Xabaal Wadareedyo Laga Helay Xuduudka Soomaalida Itoobiya Iyo Oromada – somalilandtoday.com
Xabaal Wadareedyo Laga Helay Xuduudka Soomaalida Itoobiya Iyo Oromada
(SLT-Jigjiga)Booliiska dalka Itoobiya ayaa sheegay in ay heleen xabaal wadareed ay ku jiraan labo boqol oo may, taas oo ku taalla xadka u dhaxeeya Oromada iyo deegaanka Soomaalida.
Boqollaal kun oo ruux ayaa ka barakacay rabshado horay uga dhacay halkaas. Warbaahinta gudaha ayaa ku warrantay in xabaasha la helay intii la waday tacaddiyo lagu eedeeyay in uu gaystay madaxweynihii hore ee Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Waxaa lagu eedeeyay in uu ku luglahaa xadgudubyo baahsan oo aadanaha ka dhan ah kuwaas oo ay ka mid yihiin jir dil, kufsi iyo dil dhacay muddadii 13 sano ahayd ee uu xilka hayay.
Bishii hore ayay warbaahinta dawladda Itoobiya lala xiriiriyo ee Fana ku warrantay in uu isku dayay in uu ka baxsado xabsigii uu ku jiray isaga oo ka booday daaqadda xabsiga uu ku xirnan yahay ka hor wakhti uu ka soo muuqan lahaa maxkamad